Company - Hebei Samsung Metal waya ntupu Co., Ltd
Anping Sanxing waya ntupu Factory e guzobere na 1990, nke bụ a ọkachamara emeputa nke welded waya ntupu ,welded waya ntupu panel ,hexagonal waya ntupu ,yinye njikọ ngere , crimped wire mesh, igwe anaghị agba nchara waya ntupu ,fencing netting ,gbasaa metal ntupu , window ihuenyo , galvanzied square waya ntupu , fiberglass mesh , e ji kpachie oghere ntupu , barbed waya , aguba waya nwere ogwu , black annealed waya , cut wire etc. Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ, agriculture, cultivation, ewu, iga na Ngwuputa. Site ugbu a anyị ugbua guzosie ike azụmahịa mmekọahụ 45 ahịa si Southeast Asia, Asia, Europe, Middle East, Africa, na quadruple ahịa ego na ndị ahịa kwa afọ.
E nwere 5 alaka ụlọ ọrụ buru 19000 square mita, 165 ọkà ọrụ na 10000 Tọn ikike kwa ọnwa na-aka dị iche iche olu iwu.
Anyị nwere a zuru okè ahịa otu isi àgwà nke na-ahụ maka ndị ahịa, ndị na-abụghị ndị na-akwụsị ijeụkwụ ịchụso ọganihu, na-enye mma mgbe-sales ọrụ. More karịa 15 oversea sales na-ekwu okwu English na-enwe ihe karịrị 4 afọ na-arụ ọrụ ahụmahụ site nkezi.
Anyị 20 emepe mkpara na ihe karịrị afọ 10 site nkezi pụrụ ịzụlite 5 ọhụrụ ngwaahịa kwa ọnwa. Firstly anyị esenidụt office obon ahịa infomantion na mgbe ahụ anyị na ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa na-izute ahịa chọrọ.
ISO 9001, ISO14001 na SGS certifiedOur quality management usoro kwekọrọ n'ụzọ ndị ISO 9001, ISO14001 na SGS ụkpụrụ nduzi na anyị na-elele onye ọ bụla nzọụkwụ na mmepụta usoro. Anyị na-azụta ngwaọrụ site maara nke ọma na-emepụta na China, na inyocha ihe n'ihu warehousing. Anyị 6 nnyocha equipments The Quality Deparment bings 6 nnyocha equipments na enịmde tupu nnyefe inspections nke ikpeazụ ngwaahịa.
Anyị nwere obi ike na anyị na ngwaahịa na ezi arụmọrụ ma faverable price. Anyị arapara 4 ụkpụrụ nke àgwà, price, iguzosi ike n'ezi na ọrụ nke na-na-anọgide na-emejuputa atumatu ofụri ahịa.